महिनावारी हुँदा बग्ने रगतलाई कपमा जम्मा गर्ने हो ? - Wash Khabar
लिखिता बराल २२ असार २०७५, शुक्रबार १०:०३ 1696 पटक हेरिएको
काठमाडौ : ‘महिनावारी हुँदा बग्ने रगतलाई कपमा जम्मा गर्ने हो ?’ मेन्स्ट्रुअल कपको बिषयमा अहिले बजारमा यस्तै भनाई सुन्न पाइन्छ । सबैले बुझ्ने सीधा भाषामा भन्ने हो भने मेन्स्ट्रुअल कपको प्रयोग गर्नु भनेको महिनावारी भएको समयमा बग्ने रगतलाई कपमा जम्मा गरेर निश्चित स्थानमा बिसर्जन गर्नु नै हो । फरक यत्ति हो, यसलाई निश्चि समयमा थाप्ने भन्दा पनि महिनावारी भएको समयमा योनी भित्रै राखिरहनु पर्दछ ।
तर कसरी त ? कपडाको टालो प्रयोग गरेर जीवन कटाएका हजुरआमा र आमाहरुलाई यो कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर शहर पसेका र पढे लेखेका महिलाले भने यसलाई प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । अहिले स्यानेटरी प्याडको सट्टामा प्रयोग गर्न मिल्ने मेन्स्ट्रुअल कपले बजार जमाउन थालिसकेको छ । यसका प्रबद्र्धकहरु त भन्ने गर्छन् ‘बाई बाई प्याड’
के हो मेन्स्ट्रुअल कप ?
मेन्स्ट्रुअल कप, हेर्दा कप जस्तै देखिने १०० प्रतिशत उच्चतम गुणस्तरीय मेडिकल ग्रेड सिलिकनले बनेको हुन्छ । यो एक पटक किनेपछि १२ बर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाएको हुन्छ । यो विभिन्न रङ र आकारमा उपलब्ध छ । शहरीया महिलाहरुले स्यानेटरी प्याडको सट्टा मेन्स्ट्रुअल कप प्रयोग गर्न थालेका छन् । मेरी स्टोप्स्की निसा राउतका अनुसार स्यानेटरी प्याड भन्दा धेरै गुणा फाइदाजनक भएकाले महिलाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
प्रयोग गर्ने तरिका तथा विधि
यो यसरी नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । योनिको आकार हेरी ठूलो, मझौला र सानो आकारमा पाइन्छ । यो स्ट्रिङ सहितको र स्ट्रिङ नभएको गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।
यसको चारवटा साना साना प्वालहरु हुनछन् । यी प्वालहरु भेजिनेल प्यासेजमा राखिन्छ । यसले भ्याकुम बनाइदिन्छ र प्यासेजमा अड्केर बस्छ । यो लगाएपछि युटेरस भन्दा माथि तिर पनि नजाने र प्यासेजभन्दा तल पनि नआउने मेरी स्टोप्स्की निसा राउतले बताउनुभयो ।
यसलाई निकाल्दा अलिकति दबाएर भ्याकुम निस्कन दिनुपर्छ । त्यसपछि सहजै निकाल्न सकिन्छ । यदि पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ३ मिनेट जत्ति पानीमा उमालेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रयोग भइरहेको अवधिमा भने सफा पानीले सफाइ गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । पानी नभएको अवस्थामा टिस्यू पेपरले पुछेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । याद राख्नुहोस् पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ६ घण्टापछि निकालेर कति भरियो भनेर जाँच गर्नुपर्छ । यसले कति समयसम्म राख्दा कति भरिन्छ भन्ने एकीन गर्न सजिलो हुन्छ ।
मेन्स्ट्रुअल कप प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरु :
यो प्रयोग गर्दा अति सजिलो हुन्छ । प्याड लगाउँदा बाहिर नै आकार देखिन्छ । तर मेन्स्ट्रुअल कप योनि भित्र राख्ने भएकाले अरु मानिसलाई थाहा हँुदैन र असहज पनि हुँदैन ।
एक पटकको महिनावारी चक्रममा करिब २०० सय रुपैयाँ प्याडमा मात्र खर्च हुन्छ । यो हिसाबले एक बर्ष वा १२ महिनामा त २ हजार ४०० खर्च हुन्छ । साला खाला १० बर्षमा २४ हजार खर्च हुन्छ । २ हजारमा किनेको मेन्स्ट्रुअल कप १० बर्षसम्म प्रयोग गर्दा यसबाट मात्र २२ हजार रुपैयाँ बचाउन सक्छौं ।
हेर्नुहोस् त स्यानेटरी प्याड जहाँ पायो त्यही फाल्नाले वातावरण विग्रिरहेकोा छ । कहिलेकाहीं कुकुरले बोकेर हिडिरहेको हुन्छ । यसले वातावरणलाई नराम्रो असर पारिरहेको छ । तर मेन्स्ट्रुअल कपको प्रयोगले वातावरणमा त्यस्तो रगतजन्य प्याडहरुको अन्त्य हुन्छ । एक पटक किनेपछि यो १० बर्षसम्म त फ्याँक्नै परेन ।
स्यानेटरी प्याड लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा यसैका कारण विभिन्न संक्रमणहरु हुन सक्छ । कतिपय प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या स्यानेटरी प्याडकै कारण उत्पन्न भएका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । तर यो १०० प्रतिशत उच्चतम गुणस्तरीय मेडिकल ग्रेड सिलिकनले बनेको भएकाले शरिरमा छुँदा एलर्जी आउने वा अरु रासायनिक कारणले समस्या आउने हुँदैन ।